2013-08-10 10:05:16 | मेरो सिन्धु
चौतारा, २६ साउन।
बिरामीको उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न रहनुपर्ने चिकित्सकहरु कमिसनको चलखेलमा लागेर स्वास्थ्यप्रति खेलवाड गर्दै आएको रहस्य खुलेको छ ।
चौतारा अस्पतालमा उपचारसेवा प्रभावकारी नभएको भन्ने बिरामीहरुको गुनासो बढिरहेका बेला चिकित्सकले कमिसनको चलखेलमा उपचारमा हेलचेक्र्याईं गर्ने गरेको रहस्य खुलेको हो ।
प्रसंग शुक्रबारको हो –जुन दिन स्याउले ७ कि साढे दुई वर्षीया बालिका पूजा तामाङ ज्वरोले आलसतालस परिन् । उनकी आमा मीनाले हतारहतार उपचारका लागि छोरीलाई चौतारा अस्पताल ल्याएकी थिइन् । लगत्तै स्वास्थ्यकर्मीले जाँचबुझ गरी भर्ना लिए अनि औषधी किन्न प्रिस्क्रिप्सन लेखिदिए –‘केल्भिन सिरप ल्याउनू’ । उनी दौडेर औषधी पसल पुगिन् । र, झोलाभरि औषधी लिएर खुवाउन फर्किइन् । तर, अस्पतालमा चिकित्सकले सिफारिश गरेको बाहेक अर्को कम्पनीको औषधी नहुने भनेर फिर्ता पठाइदिए । निरक्षर मीनालाई पत्तो थिएन, जे दिए औषधी पसलले त्यही लगेकी थिइन् । भोलिपल्ट त्यो औषधी फिर्ता लगिदिइन् । फेरि डाक्टरको सिफारिश अनुसार औषधी खोज्दै भौंतारिइन् उनी । तर, उनले कुनै मेडिकलमा भेटिनन् । र, लगिन् पहिलेकै –निको सिरप (झोल) औषधी) ।
त्यतिबेलासम्म बिरामी पूजा बेहोस छिन् । यद्यपि डाक्टरले आप्mनो सिफारिश बमोजिमको औषधी नल्याएको भन्दै दुई दिनसम्म औषधी खुवाएनन् । छोरीको उपचारार्थ आएकी मीनाले भनिन् –‘दुई दिन भयो । न औषधी ख्वाए, न त अन्त लैजान भनेका छन् ।’ यसको खास कारण रहेछ –‘औषधी कम्पनीसँग डाक्टरहरुको कमिसन चलखेल । जुन कम्पनीको औषधी जिल्लामा बढी बिक्री हुन्छ, त्यसवापत हाकिमलाई कमिसन आउँछ । अस्पतालका एक कर्मचारीले भने –‘उस्तै काम गर्ने भए पनि सधैं एकै कम्पनीको औषधी सिफारिश गर्छन् ।’
स्रोत अनुसार बिरामी निको भन्दा पनि चौतारा अस्पतालका केही चिकित्सक पैसा कमाउधन्दामा लागेर स्वास्थ्यप्रति हेलचेत्र्mयाईं गर्दै आएका छन् । प्रायजसो ज्वरो आउँदा केल्भिन सिरपका निको नामक औषधी प्रयोग गरिन्छ । यी दुबै औषधी जिल्ला अस्पतालमा निःशुल्क पाइन्छ । तर, सरकारले निःशुल्क दिन भनी पठाएका ती औषधीहरु कार्यालय प्रमुखको मिलेमतोमा निजी मेडिकल लगेर बिक्री वितरण गर्ने गरेको पाइएको छ ।
त्यसवापत केही हिस्सा वितरकलाई दिने र मोटो रकम कार्यालय प्रमुखले खाने गरेका छन्, अस्पताल स्रोतले भन्यो । तर, अस्पतालका प्रमुख डा. रमण सिंहले सबै कुरा हावादारी भन्दै सदैव बिरामीको उपचारमा तल्लिन रहेको दाबी गरेका छन् ।
स्रोतले भनेको छ –‘चौतारा अस्पतालका प्रमुख डा. रमणप्रसाद सिंहको डीजेपीएल काठमाडौं, आईमील काठमाडौं, क्वीमेड काठमाडौं र यूमेडीसीडी काठमाडौंलगायत औषधी कम्पनीहरुसँग सिधा सम्पर्कसँगै कमिसनको चलखेल हुने गरेको छ । अस्पतालमा आउने बिरामीहरुलाई ती कम्पनीबाहेकका औषधी सिफारिश गर्दैनन् । त्यसोत वर्षेनी निःशुल्क वितरण गर्न पठाइएका औषधी म्याद गुज्रिएको भन्दै देखाउनका लागि उपचारार्थ आएका बिरामीलाई चिकित्सकले वास्ता नगरेको गुनासो पनि बारम्बार सुनिँदै आएको छ । डाक्टरले ढोकैबाट हेरेर फर्कने र तल्लोस्तरकालाई सधैंजसो बिरामी जाँच गर्न लगाउने गरेको बिरामीहरुको पनि गुनासो छ । भव्य भवनभित्रको उपचार पद्दति सन्तोषजनक नभएको आम जिल्लावासीले ठह गरेका छन् । तर, अस्पतालका डाक्टरहरु भने कमाउधन्दाका लागि निजी मेडिकलमा धाउने गरेका छन् । चौबिसै घण्टा बिरामीको उपचारार्थ खटिनुपर्ने उनीहरु प्रायः समय मेडिकलमा बिताउने गरेका छन् ।
तीन जनाको दरबन्दी रहेको चौतारा अस्पतालमा अहिले सबै चिकित्सक कार्यरत तन् । ती मध्ये कतिपय निजी क्लिनिकमा बढी भेटिन्छन् ।